Lokomby-Manakara: Saika ho doran’ny andian’olona ny tobin’ny Zandary
samedi, 07 décembre 2019 22:22
Nieren-doza ny tobin’ny Zandary ao Lokomby-Manakara androany. Nisy andian’olona saika hanao amboletra hanao fitsaram-bahoaka handoro ny tobin’ny Zandary saingy voasakana izany rehefa nanao tifi-danitra ny Zandary nanaparitahana azy ireo.
Vono olona nitranga tao Vohitrapanga, Kaominina Ambalaroka Distrikan’i Manakara, tamin’ny 25 novambra 2019 no niandohan’ny olana. Voasambotra ny nahavanon-doza ary notanana am-ponja rehefa natolotra ny Fitsarana taorian’ny famotorana azy.
Araka ny fomban-tany amin’iny faritra iny, na inona na inona didin’ny Fitsarana dia tsy maintsy manolotra omby ho an’ny fianakavian’ny maty ny ray aman-drenin’ilay nahavanon-doza.
Tonga tao Marokorika sy Soamiafana, Kaominina Bekatra, Distrikan’i Manakara nikaroka ny rain’ilay nahavanon-doza ny Fokonolona avy any Ambalaroka, saingy niveri-maina tsy nahita. Nentin-katezerana noho izany ireto andian’olona ireto rehefa tsy nahita izay notadiavina ka nopotehina sy nodoran’izy ireo ny tranon’ny ray aman-drenin’ilay tovolahy namono olona. Tranga niseho ny 4 sy 5 desambra 2019 teo.
Niakatra tao Manakara ny rain’ilay namono olona, androany atoandro, hametraka fitoriana tao amin’ny GAPJ (Groupe d'Appui à la Police Judiciaire) Zandary Vatovavy Fitovinany noho ny nandoran’ny sasany ny tranony. Naverin’ny tao nankany Lokomby izy, satria ny Zandary ao Lokomby no efa mandray an-tanana ny raharaha.
Ny tolakandro, androany ihany, dia nisy andian’olona avy any Vohitrapanga tonga tao amin’ny « Poste avancé » ny zandary mba haka an’io ray aman-dreniny io hampiharana fitsaram-bahoaka. Nomen’ny zandary alalana ny solontenan’ireto andian’olona ireto hisava ny biraon’ny zandary saingy tsy nahita na inona na inona. Tsy afa-po tamin’izany ireto andian’olona ireto ka nikasa ny handoro ny biraon’ny zandary.
Nandray fepetra ny zandary niaro ny tobiny, izay faritra mena. Nanao tifi-danitra ny zandary nanaparitahana ny olona. Tsy nisy naratra. Voafehy ny toe-draharaha. Nanome tanana ireo namany ao Lokomby ihany koa ny zandary avy ao Manakara.